TSY FANANAN’ASA ETO MADAGASIKARA: Hitondra vahaolana maharitra ny HAFARI Malagasy – Madatopinfo
Maro ny tanora no manana mari-pahaizana sy mivoaka amin’ireny sekoly ambony ireny isan-taona. Olana ho azy ireny anefa ny fitadiavana asa sahaza ny diplaomany aty aoriana. Nanampy trotraka ihany koa ny krizy ara-pahasalamana nateraky ny valanaretina Covid-19 teto amintsika ka nitombo ny orinasa nampihena ny mpiasa ao aminy. Manoloana izany indrindra dia manana vahaolana matipaika ny fikambanana Hafari Malagasy sy ny Fitrama na Fikambanan’ny mpitsabo nentim-paharazana mampiasa ny raokandro malagasy miaraka amin’ireo mpiara-miombon’antoka aminy. Isan’izany ny famoronana asa ho an’ny malagasy rehetra tsy ankanavaka amin’ny alalan’ny paikady hananan’izy ireo. Izany moa dia hampafantarina amin’ny fomba ofisialy ny alakamisy 28 janoary hoavy izao. « Tsy mitady seza ara-politika velively izay tahaka ny toetsain’ny fiarahamonim-pirenena sasany izay midongy seza, maka famatsiambola hoentina hivarotana tanindrazana any ivelany. Tsy hitarika olona hidina an-dalambe ihany koa fa ny angatahanay amin’ny fitondram-panjakana ny hijerena ireo fiarahamonim-pirenena tena malagasy », hoy i Jean Nirina Rafanomezantsoa mitarika ny fikambanana Hafari nandritra ny fihaonany tamin’ny mpanao gazety ny alatsinainy 25 janoary teny amin’ny 67Ha. Nohantitranteriny hatrany fa tsy hisongona ny andraikitry ny fitondram-panjakana akory izy ireo ny amin’izany tetikasa famoronan’asa hatolotra izany fa kosa hanampy sy hifampizara ny fitondrana amin’ireo olana ara-tsosialy misy eto amintsika. Antenaina araka izany fa ho betsaka ireo malagasy tsy an’asa na very asa no hovoakasika ao anatin’ity fandaharan’asa atolotry ny Hafari ity.